संकल्प स्वास्थ्य- स्वास्थ्य - कान्तिपुर समाचार
वैशाख १, २०७५ अतुल मिश्र
काठमाडौँ — ०७५ साललाई हालसम्मकै सबैभन्दा स्वस्थकर वर्ष बनाउनुस् । यसका लागि खासै केही गर्नु पर्दैन, तपाईंले पूरा गर्ने गरी सामान्य संकल्प लिए पुग्छ । हामी नयाँ वर्षमा केही संकल्पसमेत लिने गरेका छौं तर धेरैजसो कायम रहँदैन । यसको मूल कारण, ती संकल्प पूरा गर्न मन, मस्तिष्क र इच्छाले तयार नहुनु हो ।
तपाईं, हामीले देख्नै नै गरेका छौं, नयाँ वर्षमा धेरैजसो मदिरा, खैनी, चुरोट, पान, गुटखालगायतका नशा त्याग गर्ने जीवनशैलीसँग सम्बन्धित संकल्प लिइन्छ । तर यो सकल्पमध्ये अधिकांश छिट्टै तोडिन्छन् ।
हामीले लिने यी सबै संकल्प पछाडि जीवनको गुणस्तर बढाउने, बढी समयसम्म स्वस्थ रहेर राम्ररी बाँच्ने इच्छा नै हो । तर यी संकल्पहरूमा कायम रहन नसक्दा हामीले बाँच्ने जीवनको गुणस्तर खस्कँदै गएर विस्तारै हामी जटिल स्वास्थ्य स्थितिसहित रोगी भएर जीवनयापन गर्न बाध्य हुन्छौं । यसैले नव वर्षमा स्वस्थ रहने संकल्प लिनोस् र जीवनमा कायम गर्नुस् । यो वर्ष स्वास्थ्य परीक्षण, खोप (भ्याक्सिन) र स्क्रिनिङका लागि समेत समय छुट्याउन मुटु रोग विशेषज्ञ डा.ओममूर्ति अनिलको सल्लाह छ । हाल बालबालिका मात्र नभई बूढापाकाहरूका लागि समेत रोग, संक्रमणहरूबाट जोगाउन विभिन्न प्रकारका खोप छन् । यस्ता खोपले स्वास्थ्यसम्बन्धी जटिलताबाट बँच्न सघाउँछ ।
तपाईंले नियमित रूपमा गर्ने चिकित्सकीय परीक्षणले समस्या देखिनुअगावै रोग/स्वास्थ्य समस्याको पहिचान गर्न सकिन्छ । यस्ता परीक्षणले गर्दा त्यो बिन्दुमै समस्याको पूर्व पहिचान हुन्छ र निको हुने सम्भावना धेरै बढी हुन्छ । शारीरिक सक्रियतासँग कुनै सम्झौता नगर्नुस् । गत वर्षको दाँजोमा यो वर्ष आफ्नो सक्रियता बढाउनुस् । दिनहुँ करिब ५ किलोमिटर हिँड्ने बानी बसाल्नुस् । सहरी क्षेत्रमा रहेकाहरूले लिफ्टको सट्टा भर्‍याङ उपयोग गर्नु स्वास्थ्यका लागि धेरै राम्रो हुन्छ । डा.ओममूर्तिका अनुसार शारीरिक सक्रियता, हिँडाइ, उपयुक्त व्यायाम, पौडी खेल्नु, साइकल चलाउनु आदि तपाईंको स्वस्थ जीवनतर्फको सुनौलो यात्रा हो । यति तपाईं कुनै पनि रूपमा चुरोट सेवन गर्नुहुन्छ भने, छोडनुस् । सूर्ती, गुटखा, सुपारीजस्ता पदार्थ खाने बानी भए त्याग्नुस् । मदिरा सेवन नगर्नुस्। यसो गर्दा आफैंले अनुभव गर्ने गरी स्वास्थ्य सम्बन्धित सकारात्मक परिवर्तन अनुभव गर्न सकिने डा.ओममूर्ति बताउँछन् । भागदौडपूर्ण दैनिकीमा आरामसँग निदाउन पाउनु पनि ओखतीजस्तै हो । वयस्क व्यक्तिले दिनुहँु ७–८ घण्टा निदाउनुपर्छ । हाल रात्रिकालीन चर्या वृद्घिसँगै निद्रा प्रभावित हँुदा मधुमेह, उदासी रोग, मुटु र रक्तनलीसम्बन्धी रोग, मोटोपनालगायत नसर्ने रोग देखिएका छन् ।
नव वर्षमा नियमित उपयुक्त रूपले आवश्यकताअनुसार साबुन–पानीले हात धुन नबिर्सने प्रण गर्नुस् । कुरा अति सामान्य लागे पनि यो एउटा सामान्य प्रयासले गर्दा थुप्रै प्रकारका संक्रमण र रोगबाट बाँच्न सकिने डा. शेरबहादुर पुन बताउँछन् । हात धुने बानीले गर्दा रुघाखोकी, झाडापखाला, जण्डिस, टाइफाइड लगायत संक्रमणबाट जोगाउँछ ।
स्वस्थकर खानपान, शारीरिक क्रियाशीलता, सकारात्मकतालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुस् । ईष्र्या, द्वेष, नकारात्मकता, चिन्ताबाट बँच्नुस् । हरियो सागपात, फलफूललगायत स्वस्थकर खानपानलाई महत्त्व दिनुस् ।
सकारात्मक जीवनशैली अपनाऔं
आयुर्वेद अर्थात् जीवनको विज्ञानले नसर्ने वा सर्ने रोगको जोखिम कम गर्न हजारौं वर्षदेखि सकारात्मक जीवनशैलीमा जोड दिएको छ । हाम्रो मुलुकमा समेत हाल करिब ६० प्रतिशत नसर्ने र ४० प्रतिशत सर्ने रोगको जोखिम छ । नसर्ने रोगको जोखिम कम गर्न वा जुध्न हजारौं वर्षदेखि आयुर्वेदले बताउँदै आएको सकारात्मक जीवनशैली र उपयुक्त खानपान नै महत्त्वपूर्ण औजारको रूपमा देखिएको छ ।
‘आयुर्वेदमा वर्णित स्वस्थ दिनचर्या र ऋतुचर्याअनुसार अगाडि बढदै रोग लाग्नबाट बँच्न सकिन्छ,’ राष्ट्रिय आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा.सिद्घार्थ ठाकुर भन्छन्, ‘आयुर्वेदले दैनिक जीवनचर्या र खाने बानीलाई विशेष महत्त्व दिन्छ । मौसमअनुसार जीवनशैलीलाई अनुकूल बनाउनुस् ।’
दिनहुँ ध्यान गर्नुस् । मनको प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्वस्थ शरीरसँग छ । ध्यान (मेडिटेसन) ले मनलाई शान्त राख्छ र तपाईंलाई रिल्याक्स अनुभव गराउँदै तनावसमेत कम गर्छ । श्वासप्रश्वाससम्बन्धी व्यायाम, प्राणायाम, योगले हामीलाई स्वस्थ रहन सघाउँछ । हालको परिवर्तित समयमा रहनसहन, खानपान, क्रियाकलापसमेत बदलिएको छ । हामी एका बिहानै ब्रह्म मुहूर्तमा उठदैनौं । दिनहुँ मौसमअनुसारको सागसब्जी, फलफूल आदि सेवन गर्दैनौं । अबेर सुत्छौं र घाम लागिसकेपछि उठ्छौं ।
प्रकृतिबाट टाढिएर आधुनिकताको नाममा हामी अस्वस्थता बोक्न थालेको आंैल्याउँदै डा. ठाकुर भन्छन्, ‘हजारौं वर्षदेखि हाम्रो मुलुकको उपचार पद्घति आयुर्वेदमा स्वस्थ रहनुको अर्थ मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक र सामाजिक रूपमा स्वस्थ रहनु हो, जसलाई हाल विश्व स्वास्थ्य संगठनले पनि विश्वसनीय मानेको छ ।’ पूर्ण स्वस्थ रहन, खुसी रहन, आनन्द मनाउन, सन्तोष गर्न, अर्काको सकारात्मक उपलब्धिको प्रशंसा गर्न, ईष्र्या, द्वेष, क्रोध आदि नकारात्मकताबाट बाँच्नसमेत सिक्नुपर्छ । डा. ठाकुरका अनुसार मनको स्थुल रूप शरीर र शरीरको सूक्ष्म रूप मन भएकोले शरीरद्वारा गरिएको कर्मको मनमा र मनमा आउने विचारको शरीरमा महत्त्वपूर्ण प्रभाव पर्छ ।
आफूखुसी औषधि खान बन्द गरौं
यो वर्ष चिकित्सकीय सल्लाहबिना आफूखुसी औषधि सेवन नगर्ने संकल्प गर्नुस् । हामीहरू धेरैजसो स–साना शारीरिक समस्याका लागि चिकित्सकको सल्लाहबिना आफूखुसी घरमै औषधि सेवन गर्छौं । यसो गर्नु स्वास्थ्यका लागि खतरनाक हुन सक्छ । सामान्य रुघाखोकीदेखि लिएर ज्वरो, दुखाइ जस्ता समस्याका लागि आफ्नो पूर्वानुभव वा पसलमा सोधेर औषधि सेवन गर्ने गर्छौं । यस्ता ‘सेल्फ मेडिकेसन’ स्वास्थ्यका लागि घातक मानिन्छ । औषधि लिनुभन्दा अगावै परीक्षण नगराउँदा रोगबारे थाहा पाइँदैन । अन्दाजी औषधि सेवन गर्दा उपयुक्त औषधिको अभावमा रोग झन् बल्झिने मात्र होइन, गम्भीर रूपसमेत धारण गर्न सक्छ ।
प्रकाशित : वैशाख १, २०७५ ०८:४७